Yintoni i-cynicism ekhanyisiweyo | Abadali be-Intanethi
Iinethiwekhi zentlalo ziye zayiguqula indlela esinxibelelana ngayo kwaye sizivumela ukuba sibonwe lihlabathi. Uninzi lwabantu lukwazile ukuma ngokubonga kuthungelwano ngomxholo wabo, nokuba yifashoni, iingcebiso zomntu, umsebenzi wabo woyilo, njl.
Kule posi, siza kuthetha ngomzobi ophuma phambili enkosi kwimifanekiso yakhe, omxholo wakhe ungowokugxeka, siza kuthetha ngaye. ukugxeka okukhanyiselweyo, efihliweyo emva kwale ngcamango kwaye siza kubona uluhlu lwemizekelo ukuze siyiqonde ngcono.
Ukuba awumazi u-Eduardo Salles kwiintanethi zentlalo, inokuba ngenxa yezizathu ezibini kuphela: mhlawumbi akanayo ifowuni ephathwayo enoqhagamshelwano lwe-intanethi, okanye usemncinci kakhulu ukwazi. umzobi, U-Eduardo Salles uye waba yintshatsheli yokugxeka okukhanyiselweyo.
1 Yintoni i-cynicism ekhanyiselweyo?
2 Ukubonisa Ukugxeka kuka-Eduardo Salles
Yintoni i-cynicism ekhanyiselweyo?
Asinakuthetha ngokugxeka okukhanyisiweyo ngaphandle kokubhekisa ku-Eduardo Salles. Malunga neminyaka emihlanu eyadlulayo, uEduardo waqalisa ukupapasha umsebenzi wakhe kwiiwebhsayithi zokuncokola yaye ngokuthe ngcembe wazenzela igama kuzo. Ngombulelo kumanethiwekhi, kuye kwabonwa ukuba umsebenzi wakhe uvela njani, udala isitayela sakhe, apho ngokukhawuleza kunye nezinto ezahlukeneyo athumela umyalezo ngemifanekiso yakhe. Nail Imifanekiso ebonisa ukuba eyona nto ingatshintshanga ukusukela oko yaqalayo kukugxeka.
Ngabalandeli abangaphezu kwe-350 kwi-Twitter, kufutshane nesigidi kunye nesiqingatha sabantu kwi-Facebook, kwaye kufuphi ne-30 kwi-Instagram, u-Eduardo Salles uye waba ngumqondiso kwiintanethi zentlalo, kwaye yonke into inombulelo kwimifanekiso yakhe nge-acid humor. Le mizekeliso ibalulekileyo, intlekisa eluntwini, ngu-Eduardo Salles, ifuna ukubonisa elona cala lihlekisayo, nelona lihlekisayo lehlabathi esiphila kulo.
U-Sales ngumzobi, umyili wegraphic, umbhali kunye nomlawuli oyilayo, bamchaza njengolungileyo ngamagama, kodwa ngcono ngemifanekiso. Utsho ngokwakhe Ukungacaci kakuhle kukuvumela ukuba ugcwalise izithuba ngocalucalulo lwakho, kwaye ukuba kwinkcubeko egcwele ucalucalulo olufana nolwethu lubangela ukuba kuvele iintlobo ezininzi zeziqhulo ngokuzenzekela.
Umzobi kwincwadi yakhe ethi, Illustrated Cynicism, ubonisa uluhlu lokuguquguquka nokulula, ngomfanekiso akwaziyo ukuwenza. ukusasaza iintlobo ngeentlobo zeengcamango kunye neemvakalelo, ngendlela ethe ngqo neyonwabisayo. Asinayo impendulo kuyo yonke imibuzo ethi qatha ezingqondweni zethu, ngumgxeki kuphela ocinga ukuba unazo kwaye ubona yonke into ngokuxakayo. Ndithi ndiyabona ukuba ilizwe lizophela kodwa andikhathali, ndisuke ndihleke. Ekuphela kwento esinokuyenza xa sijongene noku kunqongophala kweempendulo kunye nokungaqiniseki kukuzihleka.
Kule ncwadi, a Ukuhlanganiswa kwezona ziqwenga zibalaseleyo ezipapashwe ngu-Eduardo Salles ukusukela ngo-2009, enamaphepha ali-144 ewonke, apho kuxutyushwa zonke iingxaki ezisenokuba zijikeleze ubomi bethu, kodwa kusetyenziswa uburharha.
I-Cynicism Illustrated, ivule iingcango ezininzi ku-Eduardo Salles, uye wanikela iintetho kwi-Miami Ad School, usebenzisane namaphephandaba, upapashe iincwadi, njl. Enye yeeprojekthi zakhe ezinkulu I-Pictoline, inkampani yoyilo kunye nemizobo yolwazi, apho iqela labazobi lisebenza khona, kuquka uEduardo Salles.
Ngokusebenzisa iifomathi ezahlukeneyo zokubonwayo, ababonisi, guqula naluphi na ulwazi kumxholo olawula ukudibanisa nenani elikhulu labantu ukuba baya kuyibona, konke oku ngendlela elula, ekhawulezayo nesondeleyo.
I-Pictoline, kunye neefomathi zayo ezintsha zokubonwayo, iye yaba luphawu lwehlabathi jikelele nakwelinye lamajelo eendaba asasazwa kakhulu eLatin America. Ngoyilo oluhle, naluphi na uhlobo lolwazi lunokuguqulwa lube yinto engaqhelekanga, ebalulekileyo kuluntu.
Ukongeza kwiincwadi zakhe, wavula iprofayile kwinethiwekhi yoluntu Facebook ebizwa, i umoya wabagxeki, apho uye wahleka abalandeli bakhe, abasebenzi, abezopolitiko, abafundi, njl. Ngokubanzi, phantse bonke abantu abamlandelayo kumanethiwekhi akhe, kodwa rhoqo ngentlonipho.
Kwenye yeencwadi zakhe, Inzululwazi yabagxeki, ikwajongana nomba wokugxeka kwaye ithi, inzululwazi abanayo abagxeki, yiyo ehlalutya ubomi bethu bemihla ngemihla nayo yonke into eyingqongileyo enokucaphukisa.
Kule ncwadi, ingqokelela yemizekeliso ichazwa apho athetha ngeyona ndlela imangalisayo yokuziphatha komntu, ihlabathi esiphila kulo namhlanje nobuvuvu, ubudenge, esiye sabandezeleka zizo zonke.
Ukubonisa Ukugxeka kuka-Eduardo Salles
Okulandelayo, makhe sibone a Ukuhlanganiswa kweyona misebenzi ibalaseleyo kaEduardo Salles onemifanekiso kwaye uphawu lwakhe lukhanyisela ukugxeka.
Kulo mzekeliso usixelela ngobomi obulandela ihempe entsha, ukususela ekuyithengeni kwethu de ife.
Ungathetha njani nathi ngenene malunga neenkampani ezidlana iindlebe nathi?, kodwa ngenene musani ukoyika. Kulo mzekeliso sibona amazwi amabi ngodliwano-ndlebe lomsebenzi.
Oku kulandelayo sinokubona indlela asebenzisa ngayo obo burharha ukuhleka zombini iinjineli kunye nabayili bezakhiwo xa kufikelela ekusombululeni ingxaki.
Kwaye kule meko, into aqhayisa ngayo ingcinga, okanye ingcamango, abanayo abafundi abaninzi ngokuya eyunivesithi. Lo mzekeliso uphakamisa umbuzo wokuba kutheni ufuna ngokwenene ukuya kufunda eyunivesithi.
Kutheni ngabantu abachubekileyo kwizifundo kuphela abathathwa njengeengcaphephe ingengabo abo balungileyo kwezinye izinto ngaphandle kokuba nazo.
Lo ngomnye wemizekeliso, kunye nayo zihleke Ngubani onganikeli iwaka entloko phambi kokwenza izinto.
Ngubani ongamaziyo umntu onekhompyuter yakhe enje, ukuba awazi mntu, kukuba ungulo mntu.
Ipolitiki yinjongo ecacileyo, xa kuziwa ekwenzeni i-satires. Sonke sibabonile abezopolitiko abanobuso obubini, bethembisa emva koko bengaphumeleli, bezama ukutshintsha iingqondo zethu.
U-Eduardo Salles uphumelele ukudala intshukumo, ngemizekeliso yakhe abantu abaninzi abayixhasayo kwaye ibango. Lo mfanekiso ngobuchule ubonakalisa uluntu esiphila kulo namhlanje, esibonisa ngokuthe ngqo kwaye ngaphandle kokufihla nantoni na, usibonisa ucalucalulo lwanamhlanje.
I-Cynicism ekhanyisiweyo iye yakwazi ukubonisa ngokugqibeleleyo umphefumlo ophikisanayo osibonakalisa njengabantu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ukuphefumlelwa » yintoni i-cynicism ekhanyisiweyo